Ibex 35 ngaphantsi kwamanqaku ayi-9.000 | Ezezimali
Njengoko bekulindelwe, izinto azihambi kakuhle kwisalathiso esikhethiweyo sokulingana kweSpain, i-Ibex 35, kweli candelo lesibini lonyaka. Ngengqiqo yokuba uye waphula umqobo obalulekileyo awayenawo ngamanqaku angama-9.000. Inqanaba elisetyenzisiweyo kwiinyanga ezidlulileyo njengenkxaso kulungelelwaniso lwamaxabiso. Ukuya kwinqanaba lokuba isebenze njengomgca we Ukwahlula phakathi kwe-uptrend kunye ne-downtrend. Ngoxinzelelo lokuthengisa olunokuthatha uninzi lwamaxabiso enza isalathiso sesitokhwe ukuya kumgangatho ophantsi wonyaka.
Ngayiphi na imeko, ayisekho ixesha lokuthenga kwiimarike ze-equity. Kodwa ngokuchaseneyo, kuyacetyiswa ngakumbi rhoxisa izikhundla kwimarike yemasheya ukulinda iinyanga zokugqibela zonyaka apho amaxabiso anokuboniswa ngamaxabiso okhuphiswano ngakumbi kunangoku. Le meko sele iyingozi kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngobungozi obungaphezulu kunakuqala kwaye apho kuninzi kakhulu okulahlekileyo kunokufumana.
Ukuqhekeka kwamanqaku e-9.000 sele kulumkisiwe ngenxalenye elungileyo yabahlalutyi bezemali. Kwisiqingatha sesibini sonyaka ngokuqinisekileyo akujongeka kulungile kwaphela kutyalo-mali kwiimarike ze-equity. Kuba ukuthengisa uxinzelelo kungakhokelela kwi-Ibex 35 nokuba amanqaku angama-8.000. Oko kukuthi, ngokubakho kwe-bearish efanelekileyo kuwo onke amanqanaba. Apho unxibelelwano oluthile kwezi marike zezemali zothethathethwano olukhulu luba nzima kakhulu. Ngaphandle kothotho lwemisebenzi ethile kunye nokuqikelela ngokucacileyo kwindalo. Ayibonakali intle kakhulu kwintengiso yesitokhwe sikazwelonke okanye ngaphandle kwemida yethu.
1 Ibex 35 kwinqanaba eliphantsi lonyaka
2 Ixabiso elibi kakhulu kwiNtengiso yeStock
3 Iingcebiso zokuphumelela
Ibex 35 kwinqanaba eliphantsi lonyaka
Ngayiphi na indlela, inye into icacile kwaye kukuba isalathiso esikhethiweyo semarike yaseSpain sele ikumgangatho ophantsi wonyaka. Le yinto ebonwe isiza kwiinyanga ezimbalwa ngaphandle kwe Imigibe yokunyusa Eziveliswe kwiimarike zezabelo. Kwaye babonisa ukuba izinto zinokuba mbi kwiinyanga ezizayo. Ngale ndlela, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokufaka iifilitha ezinamandla ukunqanda ukwenza iimpazamo ebusweni bale migibe siye sabhekisa kuyo. Ngomgangatho wokuzithemba ophakathi kwe-5% kunye ne-10% kwaye oko kuya kusinika ukhuseleko olukhulu lokuthatha isikhundla kwiimarike zezabelo.
Ngayiphi na imeko, yonke into ibonakala ibonisa ukuba kwisemester yesibini kulo nyaka wezifundo, ukufikelela kumgangatho ophantsi wonyaka. Ukuze ungafikeleli kula manqanaba ngamaxabiso, esona sicwangciso siliqili sotyalo-mali siya kulala ekupheliseni izikhundla ngaphambi kokuya eholideyini. Ukuze xa kufika iinyanga zokugqibela zonyaka ungaphinde ujonge ukubuyela kwiimarike zezemali. Phantsi ubungqongqo obuthatha njengobuyimfuneko ngokuxhomekeke kwiprofayili oyibonakalisayo njengomtyali mali ophakathi kunye nomncinci kwaye ngokuqinisekileyo imali oza kuyityala kwiimarike ze-equity.
Ixabiso elibi kakhulu kwiNtengiso yeStock
Ngayiphi na imeko, kule meko kuya kuhlala kukho amaxabiso esitokhwe aqhuba kakubi kunabanye. Ezi zinto kufuneka uziphephe konke konke kuba ungashiya i-euro eninzi endleleni. Elinye lala macandelo ngokungathandabuzekiyo ibhanki ukuba akazukuhamba kwelona xesha lihle. Akumangalisi ukuba amathandabuzo eveliswa phakathi kweearhente zezemali aphezulu kakhulu. Ngaphandle kwento yokuba amaxabiso abo afumene izilungiso ezibalulekileyo kwaye kunokubonakala ngathi bakhuphisana kakhulu okwangoku. Kodwa le yimpazamo onokuyenza kwizicwangciso oziqhubayo ukusukela ngoku ukuya phambili.
Ngelixa kwelinye icala, iinkampani ezijikelezayo zinokwenza kakubi kunamanye amacandelo. Umzekelo, le yeenkampani ezinxulumene nemveliso yentsimbi. Ngale ndlela, abameli bayo abafanelekileyo zezi: Arcelor kunye neAcerinox Bazimisele ukungazinzi okukhulu kumaxabiso abo kwaye kungokuchanekileyo kumaxesha aphindaphindiweyo xa besebenza kakubi kakhulu kwiimarike ze-equity. Njengolona khuselo luqinisekileyo kwintengiso yesitokhwe kuba zinolwazelelelo kolu tshintsho lweendlela ezinobundlobongela nalapho kufuneka ungabikho ekuthatheni isikhundla. Ubuncinci kwikota elifutshane.
Ukuze ube nempendulo engcono kwimeko ye-Ibex 35 engaphantsi kwe-9.000 euro, akukho nto ingcono kunezinye iingcebiso ezilula onokuzenza ukusukela ngoku. Ngeyona njongo iphambili yokukhusela izikhundla zakho kwimarike yemasheya kunye nokuze usebenzise amathuba ezorhwebo avela kwisiqingatha sesibini sonyaka. Njengoku kulandelayo esiza kukunika apha ngezantsi:
Eli ayiloxesha lokutyala imali kwimarike yemasheya kwaye lixesha lokuba buyela kwezinye iimodeli zokonga ikhuselekile kwaye oko kunokuqinisekisa ukubuya okuncinci minyaka le.
Sijongene nexesha apho kufuneka ukhethe kakhulu kwaye ke awunakuziva unyanzelekile ukuba utyale imali oyigcinileyo kwiimarike zezabelo.
Ukurhweba kwimarike yemasheya kufuneka kujolise kakhulu ixesha elifutshane Kwaye kuyo nayiphi na imeko ubaphelise xa kuveliswa inzuzo, nokuba zimbalwa kangakanani.
Kwimeko apho ungagxili kutyalo-mali kwiimveliso zezemali nomngcipheko ophezulu kwaye zichanabeke ngakumbi ekuweleni kwisalathiso esikhethiweyo kwii-equities zesizwe.
Isisombululo esihle sokuphepha olu hlobo lwengxaki yile uthathe ikhefu kubudlelwane bakho nehlabathi lemali. Kuya kufuneka uthathe iholide ukuze ukwazi ukuphumla kwezi nyanga.
Isicwangciso esisebenzayo kakhulu kula matyala siqulathe Ulwahlulo olwahlukeneyo ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselweyo. Ngeeasethi zemali ezahlukileyo: umvuzo ohleliyo, umvuzo oguqukayo, imali, izinto ezingasetyenziswanga okanye ezinye iindlela ezinokubangela umdla ngalo lonke ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ibex 35 ingaphantsi kwamanqaku ayi-9.000